HomeAfaan OromooAwwal Abdiifi Ajjeechaa Gadab Asaasaa
Odeessa keessoo ODP tii dhufe!!
Via Yaya Beshir, September 24, 2019
Odeessa kana baasuun kan barbaachiseef ummanni waan deemaa jiru beekuu qaba ejjennoo jedhuuni. Ummanni dhugaa jiru yoo beeke badii irra hamaa dhufu dursee ofirraa eeguuf gargaarama. Odeessa kanatti osoo hin seenne dura keessa deebinee MMf yaadachiisa goona. Adeemsi ODP keessatti sabboontota moggeessuuf godhamaa jiru kun keessattuu wayta alagaan nurrattti wal jaaraa jirutti eenyuyyuu caalaa suma miidha. Oromoo irraa fageessee qilleensa irratti si hambisa. Karaa qajeelaatti deebi’i.
“Qaamni amma koree qindeessituu Mootummaa Oromiyaa jedhamee aangoon ol’aanaan kennameef Addisuu Araggaa, Shimallis Abdiisaa, Awwal Abdii, Kaasahun Gofee ti. Jara kanatu Oromiyaa akka barbaadanitti naannessaa jira. Dhimma siyaasaa, muudama, nageenyas tahee waan fedhan isaanuma kanatu murteessa. Kaabineen ofumaaf malee aangoo hin qabdu. Kan caalaa nama gaddisiisu ammoo, duuti ilmaan Oromoo namoota kanatti hin dhagahamu. Dantaa ofiisaanii qofa ari’u. Hundinuu fakkeessituu fi sobduudha. Abiyyiin jala gugguufuu malee rakkoo Oromoof fala kaa’uu fi of fakkaatanii yaaduu hin danda’anu yookiis hin fedhanu. Jarro kun osoo sirni nafxenyaa nutti deebi’ee warra amin jedhee fudhatudha. Abbaan dhufe moohu ergamuufiif duubatti warra jedhuu miti. Hidhaa amma Oromiyaa keessatti raawwataa jiruuf, dhoorgii alaabaa Oromoo irratti godhamaa jiru, akkasumas Oromummaa dadhabsiisuun walqabatee tarree duraa irratti gaafatamoo dha. Lammaa fi Xayyibaa irrattis kan ijaaramee kuffise warruma kana. Abiyyiinis guyyaa guyyaan dogoggorsiisaa oolu.
Godina Gujii Bahaa Aanaa Uraagaattii Waj/Po/ Aanaa Uraagaa guyyaa shan dura meeshaalee seeraan alaa (Kontirobaandii) Godina Dillaa irraa gara Magaala Haroo Waaccuu seene hordoffii ummaanniifi qaamni nageenya Poolisii Aanaa Uraagaa taasiseen Gandaa 02tti iddoo addaa #Sonqollee_Horaa jedhamutti to’annaa jala olee ture.
Meeshaan kunis zaayitii nyaataa abbaa Lit digdama (20) jarkaanaa jahaatama (60) ol-tahuufi sukkaara kuntala saddeettama (80) ol ture. Konkolataan daldalaa kontirobaandii fe’ee ture qabeenna dhunfaa tahee Lakk. Gabatee isaa A.A 86656 dha.
Yakka kanarratti poolisii aanaatiin himannaan itti banamee ture. Himannichi Mana Murtii Aanichaatti yoo ta’uu, Manni Murtii Aanichaa hooggansa isaatiin ilaaluun qarshii kuma saddeettama (80,000) fudhachuun bilisaan guyyaa 13/01/2012 gad- dhiseera jedhu.
Ummanni yakka manni murtii aannichaa raawwateen dallanee iddoo malaanmaltummaan dhoorkamaa jirutti gochi akkana rawwachuun isaa boruuf yakki kamuu yoo dalagame akka bira hin dhaabanne gungummaa jira.
#Maddi_Oduu: Poolisoota Aanaa Uraagaa irraa
(SBO – Fulbaana 23,2019) Alaabaa kana asiin gahuuf dhiiga ilmaan Oromootu itti dhangala’e. Lafee hedduutu itti caccabe. Qabsaawotni Oromoo Alaabaa kana mul’isuu fi gadi dhaabuuf baddaa fi gammoojjiitti, baadiyaa fi magaalaatti aarsaa ta’an kumaa kitila. Isa fagoo dhiisnee isuma as kaluu kana qofa yo yaadanne Qeerroon keenya Alaabaa kana baatanii, faajjii kana ol kaasuuf rasaasa diinaan kufan kumaan lakkoofna.
Alaabaa kana irratti qoosaan hin jiru. Yeroo itti alabaan gabroomfataa itti bakka argatetti Alaabaa Oromoof iddoo kennuu diduun, cicciruun, gubuun, barjaa alaabaa kana qabu jigsanii alaabaa kana xiqqeessuun lubbuu fi dhiiga ilmaan Oromootti qoosuu dha. Kanaaf Oromoon Alaabaa mallattoo isaa ta’e kanaaf waardiyaa dhaabbachuu qaba. Alaabaa kana ol kaasee mul’isuu qaba. Bakka isaaf danda’ame hundatti Alaabaa isaan mul’achuu qaba.
Warri kalee nu gabroomfataa turee fi har’allee nu bituuf amuummatuyyuu alaabaa gabroomsaa kana mirmirsaa nu irra yaa’u; isaan kanaaf qaamni beekamtii fi hayyama kennu Alaabaa Oromoo bira ga’ee waan qoqqobbii nu irra kaa’uuf hin qabu.
Oromoon/Qeerroon bakka Ayyaanaatti, iddoo cidhaatti, fulaa walgahiitti, yo danda’ameef bakka hojii isaatti Alaabaa Oromoo (Diimaa – Magariisa – Diimaa) mul’isuu qaba. Alaabaa keenya qabannee bakka aadaa fi ayyaanota keenyaatti mul’achuuf hayyama qaama kamiituu eeguu hin qabnu.
Bakka itti Oromoon miliyoonotaan godinaalee Oromiyaa cufa irraa walgahu Ayyaana Irreechaa irratti. Ayyaana Irreechaa irratti Oromoon Alaabaa isaa qabatee bahuu qaba. Kanas hayyama qaama kamiituu eeguu isa hin barbaachisu.